Ogaden News Agency (ONA) – Israa’iil oo Sheegtay Inay Dhulka Lasintay Wado Ay Xamaas Dhulka Hoostiisa Ka Qodotay.
Israa’iil oo Sheegtay Inay Dhulka Lasintay Wado Ay Xamaas Dhulka Hoostiisa Ka Qodotay.
Israa’iil ayaa sheegatay in Ciidankeedu uu burburiyay wado weyn oo ay dhulka hoostiisa ka qodeen dagaalyahanada falastiin taas oo gaadhay gudaha Israa’iil.
Wasiirka difaaca ee Israa’iil Avigdor Lieberman ayaa sheegay in wadadani ay ahayd tii ugu dheerayd oo ay israa’iil ogaato. Afahayeen u hadlay milatariga ayaa sheegay in wadadan la qodayay tan iyo 2014-kii ee dagaalka Gaza.
Israa’iil ayaa burburisay 30 wado oo laga qoday dhulka hoostiisa kuwaasi oo ay ku sheegeen in looga gol lahaa in weeraro looga qaado Israa’iil. Israa’iil ayaa isticmaaleysay talaabooyin hormarsan oo ay ku burburineysay wadooyinka ay qodaan mujaahidiinta falastiin.
Afhayeenka milatariga israa’iil Lt Col Jonathan Conricus ayaa sheegay in wadadaan ay qodeen ururka Xamaas waxa ayna ka bilaabeen agagaarka Jabaliya oo ku taallo waqooyiga Gaza. Waxa uu intaasi ku daray in wadadu ay gudaha u gashay israa’iil gaar ahaan Nahal Oz, balse wali uma aysan sameyn meel laga baxo.
Israa’iil ayaa burburisay waddada dhamaadka toddobaadkan, sida laga soo xigtay ciidanka. Waa godkii shanaad ee laga burburiyo Gaza bilihii ugu dambeeyay. Tan iyo sanadkii hore, Israa’iil ayaa isticmaaleysay qalab khaas ah oo lagu ogaanayo godadka.